အဖြူရောင် ဇာလေးဝတ် ပြီး တော့ အရမ်းလန်း တဲ့ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေ တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ VIDEO…. – Shwe Naung
ချစ် ပရိသတ် ကြီးရေ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင် ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေက ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင် နေတဲ့ ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပုံ လေးတွေဟာ ဆိုရင် လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက် များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမ ကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် လျက် ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ် ချစ်တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြား လှပလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်က ပုရိသ တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထား တာဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားကောက် ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ် အများစု အားကျချစ်ခင် နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာ လတ်တလော မှာတော့ အမိုက်စားလှရက် လွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုတွေ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် “
ချစ်ပရိသတ် ကြီးတွက် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ လှသွေး ကြွယ်နေတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို လေးတွေကို မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှုအားပေးသော ချစ်ပရီသတ်ကြီး လည်း သာယာပျော် ရွှင်သောနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
သဇင်ဦးရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…
အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ရေချိုးနေတဲ့ အကြမ်းစားပုံ တွေ……. ပက်ထရစ်ရှာ